Dib u soo kabashada Dalxiiska Afrika, Kacaankii Dalxiiska Sacuudi Carabiya ayaa socda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Dib u soo kabashada Dalxiiska Afrika, Kacaankii Dalxiiska Sacuudi Carabiya ayaa socda
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Investments • Jamaica News Breaking • Wararka Kenya • News • Ammaanka • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Markii Wasiirka Dalxiiska Sacuudiga Mudane Ahmed Al-Khateeb, lagu arkay Jamaica isagoo xiran koofiyad Bob Marley, kacaankii Safarka iyo Dalxiiska ayaa hada bilaabmay.
Dalxiiska Adduunku wuxuu ubaahan yahay caawimaad iyo Sacuudi Carabiya oo mar kale halkaas u ciyaareysa doorka maqan ee loogu talagalay Mareykanka Dalxiiska, oo lulaya calanka Sacuudiga sare iyo caan.
Sacuudi Carabiya waxay ku socotaa to UNWTO oo laga rarayo Madrid loona wareejinayo Riyadh inay marti u noqoto xarun cusub oo Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO), laakiin waxay mar hore marti u tahay Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC) xafiiska gobolka iyo dhowr dadaal oo kale oo caalami ah.
Kenya waxay ku casuuntay wufuud shir madaxeedka soo socda ee Soo-kabashada Dalxiiska Afrika ee Jimcaha ka dhacaya Dalkan Bariga Afrika. Qaar badan oo ka mid ah wufuuddu ma sugi karaan inay la kulmaan Wasiirka Dalxiiska Sacuudi Carabiya Ahmed Al Khateeb, oo ay u badan tahay inuu noqon doono xiddigga ugu muhiimsan ee ifaya munaasabadda.
Xoghayaha Dalxiiska Kenya, Najiib Balala, sidoo kale waa hogaamiye caalami ah oo ku soo lug yeeshay hawlo badan oo caalami ah, oo ay ka mid yihiin eTurboNews- taageeray Shabakada Dalxiiska Adduunka iyo Guddiga Dalxiiska Afrika. Isagoo ay weheliyaan Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, Balala ayaa laga dhigay a Geesi Dalxiis by WTN sanadkii hore.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica Bartlett ayaa hada yimid Kenya wuxuuna kahadli doonaa shir madaxeedka asaga oo ah hogaamiye feker caalami ah oo aad looga ixtiraamo adkaysiga iyo soo kabashada dalxiiska. Wuxuu jeedin doonaa khudbadiisa muhiimka ah ee Shir Madaxeedka Afrika.
Inta uu joogo Kenya, Wasiirka Jamaica waxa uu MOU la saxeexan doonaa dayax gacmeedka Satellite Global Resilience & Crisis Management Center (GTRCMC) ee jaamacadda Kenyatta kadib safar uu ku tagay Khamiista.
Madaxweynaha Kenya Kenyatta wuxuu u shaqeeyaa gudoomiye sharafeed (matalaya Afrika) ee GTRCMC oo uu wehliyo Raiisel Wasaaraha Jamaica Andrew Holness iyo Marie-Louise Coleiro Preca, Madaxweynihii hore ee Malta.
Waxa ugu muhiimsan ee booqashada Bartlett ee Kenya dabcan waxay noqon kartaa sii wadida wadahadalada maalgashiga Wasiirka Dalxiiska Sacuudi Carabiya, Ahmed Al-Khateeb, oo si rasmi ah u bilaabmay bishii Juun markii shirkii ugu horreeyay ee Jamaica-Saudi Arabia ay diirada saareen maalgashiga gudaha si loo kobciyo kobaca dhaqaalaha iyo abuurista shaqooyin cusub oo maxalli ah oo loogu talagalay waddankiisa Caribbean.
Markii Bartlett iyo Al Khateeb loo arkaayey koox kacaan, waxay iska caddahay in Sacuudi Carabiya ay is bedeshay oo ay si dhaqso ah isu beddeleyso - iyadoo balaayiin ay taageerayaan kacaankan.
Koox kacaan ah
Waqtigaas, Wasiirka Al Khateeb wuxuu hogaaminayay wafdi heer sare ah booqashadiisii ​​ugu dambeysay ee Jamaica, oo ay kamid yihiin ka soo qeyb galka, Abdurahman Bakir, Madaxweyne kuxigeenka Soojiidashada Maalgashiga iyo Horumarinta ee Wasaaradda Maalgashiga ee Saudi Arabia, iyo Hammad Al-Balawi, General Maamulaha Maareynta Maalgashiga iyo Kormeerka Wasaaradda Dalxiiska Sacuudiga.
Balala, Bartlett, iyo Al Khateeb waxaa laga yaabaa inay ku guuleystaan ​​isku darka hoggaamiyeyaasha maxalliga ah iyadoo loo wajahayo qaab caalami ah oo waxoogaa rajo ah looga geysto waxyeellada Afrika ee safarka iyo dalxiiska
Cuthbert Ncube, Gudoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika, iyo fududeeyaha Mashruuca Rajada oo uu hogaaminayo xogheyihii hore ee UNWTO Dr. Taleb Rifai, wuxuu yiri: “Gudiga Dalxiiska Afrika wuxuu la taagan yahay diyaarna u yahay inuu gacan ka geysto iskuna duwo dadaal kasta oo ka soo bixi kara dooda muhiimka ah ee soo socota. Soo kabashada Dalxiiska Afrika. Xasiloonidu maahan oo kaliya muhiim in dib loo horumariyo warshadaha dalxiiska iyo dalxiiska ee qaaradda oo aad loogu baahnaa, laakiin sidoo kale xasiloonida iyo amniga dalalkeenna badan. ”
Wasiirka Sacuudi Carabiya Al Khateeb, oo ah Gudoomiyaha Sanduuqa Horumarinta Sacuudiga ee balaayiinta doolarka mareykanka ah, wuxuu muujiyey aragti ah inuu kobciyo balaarinta howlaha ganacsi ee Saudi Arabia ee aduunka.
Shir dib u soo kabasho Dalxiis ayaa lagu qabtay magaalada Riyaadh, Sacuudi Carabiya, bishii Meey ee sanadkan. Waxay diiradda saartay xilligii cusbaa ee waaxda dalxiisku soo gelaysay oo la baaray siyaabo lagu sidoo kale dib loogu dhiso waaxda dalxiiska Afrika oo saamayn xun ku yeelatay cudurka COVID-19 ee faafa.
Shirka Kenya waxaa la filayaa in lagu baaro fursadda iskaashi xooggan oo dhexmara dalalka Afrika iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyo in la yareeyo dhibaatooyinka aafada iyo kor u qaadista adkeysiga.